Mitemo yebasa - Bayu Label
Iyi webhusaiti inoshandiswa ne KUNYIKA YENYIKA YENYIKA. BAYU THE LABEL ibasa raive naro KUNYIKA YENYIKA YENYIKA. Munharaunda yese, mazwi "isu", "isu", "IWE" uye "vedu" anoreva KUNYIKA YENYIKA YENYIKA. KUNYIKA YENYIKA YENYIKA inopa iyi webhusaiti, kusanganisira zvose zveruzivo, zvishandiso nemashandi anowanikwa kubva kune ino yepaiti kune iwe, mushandisi, akagadziriswa pamagamuchirwa ako ose mazwi, mitemo, mazano uye zvizivo zvakataurwa pano.
Nokushanyira nzvimbo yedu uye / kana kutenga chimwe chinhu kubva kwatiri, iwe unobata mu "Basa" redu uye unobvumirana kusungwa nemitemo nemirairo inotevera ("Mitemo yeBasa", "Mitemo"), kusanganisira iyo mamwe mazwi nemitemo nemitemo rinotsanangurwa pano uye / kana inowanika ne hyperlink. Iyi Mitemo yeBasa inoshandiswa kune vese vashandisi vewebsite, kusanganisira pasina vamiririri vashandisi vashandisi, vatengesi, vatengi, vatengesi, uye / kana vatsigiri vehupenyu.
Sedu redu rinowanikwa paC Squarespace, Inc. Vanotipa ne-online e-commerce platform iyo inotitendera kuti titengese zvigadzirwa nemishandiro kwatiri.
Iwe unobvuma uye unobvumirana kuti isu tinopa kuwanika kwezvigadzirwa zvakadaro "sezvazviri" uye "sezviripo" pasina chero zvivimbiso, mumiririro kana mamiriro ezvinhu epi zvayo uye pasina kubvumirwa. Hatingavi nemhosva chero ipi zvayo inobva kune kana inobatanidza kushandiswa kwako kwezvimwe zvezvikwata zvechitatu.
Tinogona, asi hatina basa rekutarisa, kutarisa, kuchinja kana kubvisa zvatinenge tazvinyatsoziva zvisingabvumirwe nemutemo, zvinogumbura, zvichityisidzira, zvakashata, zvinosvibisa, zvinonyadzisa, zvinonyadzisa kana zvimwe zvinokanganisa kana kuputsa pfuma ipi zvayo yepfungwa kana iyi Mitemo yeBasa .
Pasinei nenyaya inofanira KUNYIKA YENYIKA YENYIKA, vatungamiri vedu, vatungamiri, vashandi, vanobatana, vashandi, makambanikoni, vashandi, vatengesi, vateresi, vatsigiri, mabhizimisi, vanobhadhara, vanobhadhara, vanobhadhara, vanobhadhara, vanobhadhara, vanobhadhara, vanobvuma, kana kuti chero zvakananga, zvisingaenzaniswi, zviitiko, , kusanganisira mari, kurasikirwa kwemari, kurasikirwa kwemari, kushandiswa kwemari, kushandiswa kwemari, kushandiswa kwemari, kushandiswa kwebvumirano, kusanganisa (kusanganisira kusaregerera), mutoro wakasimba kana kuti zvimwe, zvichibva pakushandisa kwako chero ipi zvayo kushanda kana chero zvigadzirwa zvakashandiswa uchishandisa basa racho, kana kuti chero ipi zvayo inoshushwa inobatanidza chero ipi zvayo kushandiswa kwako kwebasa kana chero chigadzirwa, kusanganisira, asi kwete, kune chero zvikanganiso kana kusasirwa mune chero zvakagadziriswa, kana kurasikirwa chero kupi zvako kana kukanganisa chero mutsa unobatwa nekuda kwekushandiswa kwebasa kana chero zvinyorwa (kana chigadzirwa) chakatumirwa, chinoparidzirwa, kana kuti chakaita kuti chiwanikwe nemusangano, kunyange kana vakurudzirwa kuti vanogona. Nemhaka yokuti vamwe vanoti kana masimba haabvumi kuregererwa kana kuregererwa kwemhosva kune zvakakosha kana kuti zvinokanganisa, mumatunhu akadaro kana masimba, mutoro wedu uchasvika pamwero mukuru wakabvumirwa nemutemo.
Unobvumirana kubatsiridza, kuchengetedza nekubata zvisina kunaka INTER WORLD EXPERIENCE uye mubereki wedu, vashandi, vanobatana, vashandi, vatariri, vatungamiri, vashandi, vatengesi, vapeji, vatsigiri vevashandi, vashandi vekutengesa, vatengesi, vashandi nevashandi, vasingabatsiri kubva kune zvavanoda kana kuda, kusanganisira mari yakakodzera yevatongi, yakagadzirwa chero ani zvake wechitatu-iyo nekuda kana kubuda mukuputsa kwako kweMitemo yeBasa kana zvinyorwa zvavanowedzera nekutaridzirwa, kana kuputsa kwako chero mutemo kana kodzero dzewechitatu.
Mipikano yose yakabatana neMitemo yeBasa inotungamirirwa uye inotorwa maererano nemitemo yeNetherlands. Kusawirirana chero kupi zvako kunobuda kunze kana kuenderana nechibvumirano ichi kunongoiswa chete kumatare ane unyanzvi muHague, Netherlands, pasinei nekodzero yekukumbira.
Mibvunzo pamusoro pemitemo yebasa inofanira kutumirwa kwatiri pa customerervice@bayuthelabel.com.